DataNumen: Cookie Mutemo
Chii chinonzi cookie?
Kuki chidimbu chidiki chemavara chinotumirwa newebhusaiti kubhurawuza uye chinochengeterwa patominal yemushandisi, inogona kunge iri komputa yako, nharembozha, piritsi, nezvimwe. Aya mafaera anotendera kuti webhusaiti irangarire ruzivo nezve kushanya kwako, senge mutauro uye sarudzo dzakasarudzika, izvo zvinogona kuita kuti kushanya kwako kunotevera kuve nyore uye kuita kuti saiti ibatsire iwe. Cookies inoita basa rakakosha mukuvandudza zviitiko zvevashandisi pawebhu.
Makuki anoshandiswa sei?
Nekuvhura webhusaiti ino urikugamuchira kuti tinokwanisa kuisa makuki pamushini wako uye tizivise ruzivo runotevera:
Statistical ruzivo rwekushandisa kwemushandisi webhu.
Iyo yakasarudzika fomati yewebhu kuwana kubva kunhare mbozha.
Dzazvino tsvagiridzo pamusoro pewebhu masevhisi uye dhata yekugadzirisa masevhisi.
Ruzivo nezveshambadziro dzinoratidzwa kumushandisi
Dhata yekubatanidza kune masocial network evashandisi, kuwana yako Facebook kana Twitter.
Iyi webhusaiti inoshandisa zvese temporary chikamu makuki uye anoramba makuki. Session makuki anochengetera ruzivo chete apo mushandisi achiwana iyo Webhu uye zvinoramba makuki akachengetwa mune yekupedzisira dhata kuti iwanikwe uye ishandiswe mune inopfuura imwechete chikamu.
Technical makuki: izvi zvinobvumira mushandisi kufamba kuburikidza newebhusaiti kana kunyorera uye kushandisa akasiyana sarudzo kana masevhisi ipapo. Semuenzaniso, nekutonga kwetraffic uye kutaurirana kwedata, kuti uone musangano, mukana wekutora zvikamu zveWebhu, nezvimwe.
Cookies kugadzirisa: izvi zvinobvumidza vashandisi kuwana sevhisi nezvimwe zvakafanotaurwa zvakajairika maficha mune yako terminal, kana mushandisi akatsanangurwa marongero. Semuenzaniso, mutauro, mhando yebrowser iyo yaunoshandisa sevhisi, dhizaini yezvakasarudzwa zvemukati.
Statistical ongororo makuki: izvi zvinobvumira kuongororwa uye kuongororwa kwehunhu hwevashandisi pamawebhusaiti. Ruzivo rwunounganidzwa kuburikidza nemakuki akadaro runoshandiswa kuyera chiitiko chewebhu, kunyorera kana nzvimbo dzepuratifomu uye kufananidzwa kwekushandisa kwevashandisi vesaiti idzi, kuitira kugadzirisa basa nekushanda kwevashandisi.
Chechitatu Party Cookies: Pane mamwe mawebhusaiti iwe unogona kuisa yechitatu-bato makuki anotendera iwe kubata uye nekuvandudza masevhisi anopiwa. Semuenzaniso, iyo nhamba yevhisi yeGoogle Analytics.
Unogona kuvharira makuki nekumisikidza marongero pane bhurawuza rako rinokutendera kuti urambe kuiswa kweese kana mamwe makuki. Nekudaro, kana iwe ukashandisa bhurawuza rako kurongedza kuvhara makuki ese (kusanganisira akakosha makuki) unogona kusakwanisa kuwana zvese kana zvikamu zvesaiti yedu kana chero mamwe mawebhusaiti aunoshanyira.
Kunze kwemakuki akakosha, makuki ese achapera mushure menguva yakati.